Hogganaa Korporeeshinii Sukkaaraa duraanii Itoophiyaa kan turan Obbo Abbay Tsaayyee fi Ambaasadar Siyyum Masfin dabalatee hoggantootni TPLF afur ajjeefamuu humna Ittisaa Itoophiyaa wabeeffachuun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan.
Hogganaa Bobbii Humna Ittisaa Itoophiyaa kan tahan Birgeder jeneraal Tasfayee Ayyaaleew Ambaasadar Siyyum Masfin dabalatee hoggantootni TPLF ol aanoon afur ajjeefamuun gariin to'atamuu himan.
Oppiresshinii barbaacha hoggantoota TPLF gaggeefamaa jiruun guyyoota muraasa duras hoggantootaa fi gaggeessitootni TPLF buleeyyiin kan akka Abboy Sibihaat to'annoo jala oolanii ture. Bal'ina gabaasa kanaa isin biraan gahuu itti fufna.
Gareen juntaa gocha kanarraa of qusachuufi kan kalee irraa barachu hindaneenye lola waraana biyyaa irratti saaquun, ibidda ofiin jalqabeen gubataa jira jedhan.
Aanga'oonni juntaa Sadaasa jalqabarratti duula Maqaleetti gaggeefameen sa'aatii 48 keessatti harka akka kennaniif kadhataman illeen, of tultummaan lakkii jechuun bosonatti galusaanii Birgadar Janaraal Tasfaayeen yaadataniiru.
Irra deebiin raayyaan Ittisa Biyyaa akka harka kennatan, hidhannoo akka hiikkataniifi dhimmisaanii seeraan akka ilaalamuuf jaarsoolii erguun gaafatulleen, diduun hunda eegdootaa qabaniitti amanuun akkasumas ''deebiinee kaana'' jechuun umuriisaanii malee bosona keessatti dhokatan jedhan.
Holqatti fayyadamuun bakka Raayyaan Ittisa biyyaa hinagarreen ala ta'uuf yaalii taasiisaa turan illeen, sakkatta'iinsa Raayyaan Ittisa biyyaafi humnootiin Nageenyaa federaalaa waliin taasisaniin har'a barbadeessuu isaanii himaniiru.
Kunis sakkata'insa qarqara laga Takazeetti dura waraana bobbaasuunItoophiyaa jeequuf socha'aa, karoorsaafi ogganaa kan turan aanga'oota juntaa humnootii eegdoota isaanii waliin erga dhukkaasa wal jijjiranii booda eedootaafi hogganttoota loltoota eegumsaa waliin barbadaa'aniiru jedhan.
Rayyaa Ittisa Biyyaa